Afrịka | Akwụkwọ Mgbaafọ 2014
MMADỤ OLE BI NA HA 979,685,702
NDỊ NKWUSA OLE NỌ NA HA 1,363,384
MMADỤ OLE A MỤỤRỤ BAỊBỤL 3,265,314
“Ugbu A, M Ga-esi na Babịlọn Ukwu ahụ Pụta”
E nwere otu nwa okorobịa aha ya bụ Thomson. O bi na Yuganda. Ihe a na-eme na chọọchị bịara gwụ ya ike. Otú ndị ụkọchukwu si ekwu tụọ ego tụọ ego mgbe ọ bụla mere ka ọ kwụsị ịga chọọchị. Ma, ọ kwụsịghị ịna-agụ Baịbụl ya kwa ụbọchị. Ihe ndị ọ gụrụ n’akwụkwọ Mkpughe kacha masị ya, ọ gbalịkwara ka ọ ghọta ihe ndị ahụ. Ọ na-eme, ya na-agụ, ya ana-edetu ihe ụfọdụ ọ ghọtara. Otu ụbọchị, mgbe otu nwanna gara ebe Thomson na-arụ ọrụ, ọ hụrụ ya ka ọ na-agụ Baịbụl. Ya na ya malitere ịkparịta ụka, ya emechaa nye ya akwụkwọ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? Thomson ji otu abalị gụchaa akwụkwọ ahụ. N’echi ya, nwanna ahụ nwetara ozi n’ekwentị ya. Ihe e dere n’ozi ahụ bụ: “M na-ekele Onyenwe anyị maka akwụkwọ ahụ i nyere m. Ugbu a, m ga-esi na Babịlọn Ukwu ahụ pụta.” Thomson kwuru ka e wetara ya akwụkwọ niile e kwuru okwu ha n’ala ala peeji ụfọdụ dị n’akwụkwọ ahụ nakwa ndị nke e kwuru okwu ha n’Ihe Odide Ntụkwasị. Ọ malitere ịmụ Baịbụl, mewe nke ọma, mechaakwa mee baptizim ná Mgbakọ Distrikti afọ 2012 nke isiokwu ya bụ “Chebe Obi Gị!” N’ọnwa Mach afọ 2013, Thomson malitere ịrụ ọrụ ọsụ ụzọ oge niile, na-enyeziri ndị ọzọ aka ka ha si na Babịlọn Ukwu ahụ pụta.
Ụmụnna Asatọ Mụụrụ Ya Baịbụl
E nwere otu nwoke aha ya bụ Jimmy. O toro na Pọt Luwis bụ́ isi obodo Mọrishọs. Ọ malitere ịṅụ mmanya mgbe ọ dị afọ iri na isii. O mechara ghọọ onye aṅụrụma. Ọ na-eme, ya ṅụchaa mmanya, ya ana-aba onye ọ bụla ọ hụrụ ọgụ. A tụkwara ya mkpọrọ ọtụtụ ugboro. Mgbe ụfọdụ, ọ na-aṅụcha ekpem mmanya ọkụ atọ na mkpụrụ sịga iri isii n’ụbọchị. Ọ na-eme, ego kọ ya, ya aṅụwa mmanya ọkụ e mere ka e jiri na-ehicha windo. O nwedịrị mgbe ọ na-aṅụ sent mama ya. Otu ụbọchị, mmadụ gwara ya na ọ dịzi ka ozu. N’ihi ya, ọ gara ebe a na-enyere ndị mmadụ aka ka ha kwụsị ịṅụ ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ ịṅụ oké mmanya. Ọ nọrọ ebe ahụ otu afọ na ọkara, ma ihe na-ebenụ ka na-ebekwa.
Rọdriges: Jimmy kpebisiri ike ịkwụsị àgwà ọjọọ ọ na-akpa
Jimmy mechara hụ Ndịàmà Jehova ma kweta ka ha mụwara ya Baịbụl. Mgbe ụfọdụ, a na-amụrụ ya ihe, ya ahapụ ihe a na-amụrụ ya gaa iwere mmanya ọ ga-aṅụ. A gụkọta ụmụnna niile mụụrụ ya ihe, ha dị mmadụ asatọ. Ma, o mechara ghọta na ya kwesịrị ịgbanwe otú o si ebi ndụ. Ọ sịrị: “Ọ dị m ka okwu Chineke e kwuru okwu ya ná Ndị Hibru 4:12 ọ̀ na-amaba m n’ime obi dị ka mma agha. Otu ụbọchị, ka m nọ na-agụ Baịbụl, m gụrụ Ilu 24:16, ebe kwuru, sị: ‘Onye ezi omume nwere ike ịda ugboro asaa, ma ọ ga-ebilicha.’ Ihe ahụ m gụrụ mere ka m gbanwee.” E nwere ike ikwu na Jimmy ‘dara’ mgbe ụmụnna asaa mụụrụ ya ihe, ya bụ na ọ kwụsịrị ịmụ ihe ugboro asaa. Ma ugbu a nwanna nke asatọ na-amụrụ ya ihe, o kpebisiri ike na ya ga-agbanwe ma ‘bilie.’ Jimmy rịọrọ Jehova ka o nyere ya aka, ọ gbalịkwara na-aga ọmụmụ ihe ma kwụsịkwa àgwà ọjọọ ya. O mere baptizim n’afọ 2003, ma bido ọrụ ọsụ ụzọ n’afọ 2012. Ọ bụkwa ohu na-eje ozi ugbu a n’ọgbakọ dị na Rọdriges.
“Jehova na Ndị Mmụọ Ozi Ga-abụ Ndị Enyi M”
Na Kenya, e nwere otu nwaanyị dị afọ iri asaa aha ya bụ Mary. Kemgbe ụwa ya, ihe ọ na-ekpe bụ chọọchị Presbiterian. Ọ na-enye aka agwa ndị mmadụ ka ha nye onyinye na chọọchị, o nyekwara aka rụọ otu n’ime ụlọ chọọchị ndị e nwere n’obodo ha. Obi adịghị ya mma mgbe nwa ya nwoke ghọrọ Onyeàmà Jehova. Nwa ya nwoke a gwa ya ka o soro ya gaa ọmụmụ ihe, ọ naghị ekwe. Ihe ọ na-agwa nwa ya bụ na ebe ya ga-aga bụ ebe a ga na-akụziri ya Baịbụl n’asụsụ Kikuyu, bụ́ asụsụ obodo ha, ọ bụghị ebe a ga na-asụrụ ya Swahili. Mary mechara kweta ịga mgbakọ distrikti a na-aga ime n’asụsụ Kikuyu. Ná mgbakọ ahụ, ọ nọ n’ebe ndị agadi na-anọ. Otú ụmụnna anyị si meso ya omume masịrị ya nke ukwuu. Ọ sịrị na ndị chọọchị ha esitụbeghị otú ahụ mesoo ya. O gere ntị nke ọma n’okwu niile e kwuru ná mgbakọ ahụ, ihe ndị ọ nụrụ mekwara ya obi ụtọ. Mgbe a gwara ya ka e jiri broshọ Gee Chineke Ntị mụwara ya Baịbụl, o kwetara ozugbo.
Ọnwa ole na ole a mụwaara ya Baịbụl, o kwuru na ya ga-achọ ịghọ Onyeàmà Jehova. N’ihi ya, ọ hapụrụ chọọchị ahụ ọ na-agabu. Ihe a o mere kpasuru ndị isi chọọchị ha ezigbo iwe. Ha kpọrọ pastọ ha nọ na Nairobi, bụ́ isi obodo Kenya, ka ọ bịa gwa ya okwu. Pastọ ahụ gbalịrị ike ya niile ka Mary ghara ịhapụ chọọchị ha, ma mbọ ya niile kụrụ afọ n’ala, n’ihi na Mary ekweghị eme ihe o kwuru. Pastọ ahụ jụrụ ya, sị: “Ole ndị ga-abụ ndị enyi gị ma ị hapụ chọọchị anyị? Ọtụtụ ndị enyi gị na ndị agbata obi gị bụcha ndị chọọchị anyị.”
Mary zara ya, sị: “Jehova na ndị mmụọ ozi ga-abụ ndị enyi m. Ndịàmà Jehova ga-abụkwa ndị enyi m.”
Mgbe ọ hụrụ na mbọ niile ọ gbara enweghị isi, ọ hapụrụ ya. Mary nọgidere na-amụ Baịbụl, ọ na-agazukwa ọmụmụ ihe niile n’agbanyeghị na ebe a na-amụ ihe dị anya n’ebe o bi. Na nso nso a, o nwere otu ụbọchị ọ chọrọ ịga ọmụmụ ihe ma ọ hụghị ụgbọala. Ọ katara obi buru mmiri na-ezonụ gaa ije awa abụọ iji rute ebe a na-amụ ihe. N’agbanyeghị otú ndị agbata obi ya si emegide ya, o kpebisiri ike na ya ga-eme baptizim.
Laịberịa: Mgbe a na-ebute oche e ji eme Ncheta Ọnwụ Jizọs. N’afọ 2013, e nwere ndị nkwusa dị puku isii na otu narị na iri anọ na asatọ. Ma, ndị bịara Ncheta Ọnwụ Jizọs dị iri puku mmadụ asatọ na otu, na narị mmadụ asaa na iri isii na abụọ
Pastọ Ha Kwaturu Ya
Na Kameruun, e nwere otu nwata nwaanyị dị afọ iri na anọ aha ya bụ Ashton. Ya na nwanne nna ya bi. Mgbe ya na Ndịàmà Jehova mụwara Baịbụl, nwanne nna ya ahụ na nwunye ya malitere imegide ya. Ha kwuru na ọ ga-esorịrị ha na-aga chọọchị Pentikọstal. Otu ụbọchị ha nọ na-ekpe ekpere na chọọchị, pastọ ha malitere ibikwasị ndị bịara chọọchị aka n’isi ka o nye ha ihe ọ sịrị na ọ bụ mmụọ nsọ. Ọ na-abụ, ọ na-ebikwasị ha aka n’isi, ha ana-ada. Ma Ashton adaghị. Pastọ ahụ kpegidere ekpere, kpegide ekpere, ma Ashton ekweghị ada. Ihe Pastọ a meziri bụ ịkwatu ya. Mgbe ha laruru, Ashton gwara nwanne nna ya na nwunye ya na ọ bụ Pastọ ha kwaturu ya, ma ha ekwetaghị ihe o kwuru. Ebe ahụ ka ọ nọ kpebie na ya agaghị agakwa chọọchị ọzọ. Ashton ka na-aga ọmụmụ ihe ruo taa n’agbanyeghị na ndị ezinụlọ ya na ndị agbata obi ha na-emegide ya.
Obere Nwa Nyere Ya Akwụkwọ Ịkpọ Òkù
N’Angola, otu obere nwa dị naanị otu afọ na ọnwa ise so gaa kpọọ ndị mmadụ òkù ka ha bịa mgbakọ distrikti n’afọ gara aga. Aha nwa ahụ bụ Anilpa. A gwara Anilpa na ihe ọ ga na-eme bụ ọ kụọ aka n’ọnụ ụzọ ndị mmadụ, ya echere, mmadụ pụta, ya enye ya akwụkwọ ịkpọ òkù, mama ya akọwaziere onye ahụ ihe akwụkwọ ahụ na-ekwu. N’ihi otú ihe a si atọ Anilpa ụtọ, mgbe ụfọdụ, ọ nadịghị eche ka mama ya na onye nwe ụlọ kwuchaa ekwuchaa, ya agafee n’ọnụ ụzọ ọzọ kụwa aka. Ihe ahụ ọ na-eme na-atọ ndị nwe ụlọ ezigbo ụtọ. Otu ihe gosiri na ọ tọrọ ha ezigbo ụtọ bụ na n’ụbọchị ikpeazụ nke mgbakọ ahụ, otu nwaanyị bịakwutere ya, sị ya: “M nọ na-achọ gị kemgbe. Obi dị m ụtọ na mụ ahụla gị, n’ihi na ọ bụ gị gwara m ka m bịa mgbakọ a.”
Ndị Isi Chọọchị Ha Echiela Ha Ọnụ n’Ala
N’ọnwa Ọgọst afọ 2012, e nwere ndị bịakwutere ụfọdụ ndị nkwusa nọ n’ọgbakọ Antaviranambo dị na Madagaska sị ha na ha chọrọ ịghọ Ndịàmà Jehova. Ha sịrị na ndị isi chọọchị ha bụ ndị okwu ọzọ eme ọzọ, nakwa na ha na-emegbu ha. Ndị chọọchị ahụ sịkwara na a naghị akụziri ha Baịbụl, na ha enweghị akwụkwọ na-akọwa ihe ndị ha kweere, nakwa na ụtụ ha na-atụ na chọọchị ka nkụ. Ha anaghị emekọ ihe ọnụ, ha ahụghịkwa ibe ha n’anya otú ezigbo Ndị Kraịst kwesịrị isi hụ ibe ha n’anya. Ha sịkwara na ha ma na Ndịàmà Jehova enweghị nsogbu ndị a.
Ha mechara degara alaka ụlọ ọrụ dị na Madagaska akwụkwọ ozi. Ihe ha dere n’akwụkwọ ozi ahụ bụ: “Anyị na-edetara unu akwụkwọ ozi a ka anyị gwa unu na anyị chọrọ ife Jehova. Ma, ebe anyị bi dị anya. Ọ na-ewe ụfọdụ n’ime anyị ihe dị ka awa itoolu ruo awa iri na ise iji ụkwụ rute ebe a na-amụ ihe. Ọ bụ ya mere anyị ji na-arịọ unu ka unu zitere anyị onye ga-amụwara anyị Baịbụl. Anyị hụrụ Jehova n’anya, chọọkwa iji obi anyị niile na-efe ya. Ma, anyị agaghị emeli ya ma ọ bụrụ na unu enyereghị anyị aka. Anyị dị narị mmadụ abụọ na iri na ise. Anyị niile esighị n’otu obodo, ọ bụghịkwa otu chọọchị ka anyị niile na-ekpe, ma anyị chọziri iji obi anyị niile na-efe Jehova, na-erubekwara ya isi. Anyị ma na unu ga-enyere anyị aka.”
Ụmụnna ji ụkwụ gawa ịhụ ha. O were ha awa itoolu iji ruo n’obodo nke mbụ. Ha nọ ebe ahụ mụọ ihe, mmadụ iri isii na ise bịakwara. Ndị nke nọ n’obodo ndị ọzọ nụrụ gbasara ya, ma kwuo ka a bịa kụziekwara ha Baịbụl. Ụmụnna ahụ gakwara ije awa anọ ọzọ ka ha gaa hụ ndị ahụ. Ha na ha mụkwara ihe. Ihe karịrị mmadụ iri asatọ bịara. Ụfọdụ n’ime ndị a ha hụrụ rịọkwara ha ka ha bịa n’obodo nke ha. N’agbanyeghị na ọ ga-ewekwa ụmụnna ndị a awa abụọ iji ụkwụ ruo ebe ahụ, ha kwetara gaa ebe ahụ, ha na ha enwee ọmụmụ ihe. Ihe karịrị mmadụ iri ise bịakwara.
Ugboro abụọ e mere mgbakọ na Mahanoro, ihe karịrị mmadụ iri atọ si n’obodo ndị a gara n’agbanyeghị na ha ji ụkwụ gaa ije otu ụbọchị na ọkara iji ruo ebe ahụ, gaakwa ije otu ụbọchị na ọkara ọzọ iji laghachi ebe ha si bịa. Mmadụ iri abụọ na ise n’ime ha bịakwara ọmụmụ ihe mgbe onye nlekọta sekit bịara. Ụfọdụ n’ime ha bụ di na nwunye. E nwekwara ndị kpọ ezinụlọ ha niile bịa. Ndị ọzọ bịakwaranụ bụ ndị agadi. Ha niile biri n’otu ụlọ. Ha nọ na-ekwurịta ihe ndị ha mụtara, na-ajụkwa ajụjụ ruo n’ime abalị. Ha kwuru na ọtụtụ ndị chọkwuru ịghọ Ndịàmà Jehova n’ihi na ndị isi chọọchị ha echiela ha ọnụ n’ala.